Lodarya - Page2of 656 -
တခြားသူတွေနဲ့ မတူပဲ တမူထူးခြားနေတဲ့ အချစ်သီချင်းလေးတွေဆိုကာ လူသိများလာပြီး အနုပညာလောကမှာ နာမည်ရပြီးသား ဖြစ်တဲ့ ပိုပိုကတော့ သူ့အနေနဲ့ ခြံတခြံလေးဝယ်ပြီး ခြံထဲမှာ နွားနှစ်ကောင်မွေးချင်တယ်လို့ ပြောကြားသွား ခဲ့ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ သူ့ရဲ့တမူထူးခြားတဲ့ အသံလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အဆိုတော်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ KZ […]
သာသနာထွန်းကားမယ့်အတိတ်နိမိတ်လို့ပြောနေကြတဲ့ နွားကျောင်းသားလေး (၃ )ဦးတည်ထားတဲ့ ဘုရား
နွားကျောင်းသားလေးသုံးယောက်ကဘုရားတည်တာပါ။လေးလည်းလေးစားမိပါရဲ့ လက်ရာအတော်မြောက်တာဖူးတွေ့ ရတယ် ​တော်​​တော်​လက်​ရာ​မြောက်​တဲ့ခ​လေး​တွေပါ ငှက်​မြက်​နှားတိုင်​ကို​တောင်​ရှိ​သေးတယ် မြင်​တဲ့သူ​တော့လူဘဲ့ဗျ ။အရံစေတီလေးတွေပါ တည်ထားတာပါ…။ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင်တော်လိုက်တာချီးကျူးဂုဏ်ယူပါတယ်။ တကယ်​တည်​ဖြစ်​ပါ​စေဗျာ က​လေး​တွေရဲ့စိတ်​ကူး သာသနာပြုချင်​တဲ့ဆန္ဒက​လေးကိုကမွန်​မြတ်​ပါ​ပေတယ်…။ နယ်စုံကပါ ဘုရားလာဖူးနေကြသတဲ့ ။ ဘုရားဖူးသူများကလည်း အလှူငွေများထည့်ဝင်နေကြပါတယ်… ကောင်းတဲ့အတိတ်နိမိတ်လို့ပြောရပါမယ်ရှင်။ ပုဂံခေတ်လို လူတိုင်းဘုရားတည်နိုင်မယ့် သာသနာထွန်းကားမယ့်နိမိတ်လို့ ယူဆမိပါတယ်….။ ဖူးမြော်ကြည်ညိုစေရန် […]
သင်္ကြန်နားရက်ပြန်မယ့် ကားလက်မှတ်အခက်အခဲရှိသူတွေ အား ဖြေရှင်းပေးမည်
သင်္ကြန်နားရက်ပြန်မယ့်သူတွေကားလက်မှတ်အခက်အခဲရှိရင် YRTA ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကို ဆက်သွယ်နိုင် မြန်မာနှစ်သစ်ကူးနားရက်တွေမှာ ရန်ကုန်ကနေ နေရပ်ပြန်ကြမယ့် ပြည်သူတွေ အဝေးပြေးကားလက်မှတ် အခက်အခဲရှိရင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီကိုဆက်သွယ် ဖြေရှင်းခိုင်းနိုင်တယ်လို့ YRTA ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ မောင်အောင်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ပေးနေတာကို ပြည်သူတွေ […]
သတ္တိရှိရင် တစ်ယောက်ချင်း ထိုးမလား..
အပန်းပြေ ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီခေတ်မှာ တလွဲဆံပင်ကောင်းနေကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေ တွေ့မြင်ဖို့ ရှဲပေးခဲ့ပါနော်… !!! ”သတ္တိရှိရင် တစ်ယောက်ချင်း ထိုးမလား” !! စိန်ခေါ်ခံရတဲ့လူငယ်ဟာ ကွက်ခနဲ မျက်နှာပျက်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာလည်း ပူကနဲရှက်သွားတယ်… လူမိုက်အဖြစ် ထင်ရှားသူလက်သွက်သူ လက်ရဲသူအဖြစ် ထင်ရှားသူတစ်ယောက်ကို ယှဉ်ထိုးဖို့နိုင် နိုင်ချေက နည်းပါးလွန်းတယ် […]
“သိန်းရာထောင်ကျော် …ဘုန်းကြီးပျံ ပြသာဒ်နှင့် ချို့တဲ့ယိုင်နဲ့နေသော …မွန်အမျိုးသားကျောင်း”
သိန်း​ ရာထောင်​​ကျော်​ ဘုန်းကြီးပျံ ပြသာဒ် နှင့်​ ချို့တဲ့​ယိုင်​နဲ့​နေ​သော မွန်​အမျိုးသား​ကျောင်း မွန်​​ လူမျိုး​တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကို အလွန်​ကြည်​ညို​သောလူမျိုးဖြစ်​သည့်​အ​လျောက် မြို့ရွာအများစုမှာ ဘုန်းကြီးပျံ ဈာပန ပွဲ​တွေကို လည်း ကြီးကျယ်​ခမ်းနား ​သော သိန်း​ရာ​ထောင်​ချီ ပြသာဒ်​ ​တွေကို သဒ္ဒာတရား ထက်​သန်​စွာ လှူတန်းကြပြီး ပညာပြည့်​ဝ​ကျောင်းဒကာ​တွေက […]
« 123 … 656 »